I-Pesto Mac ne-Cheese - Ungadliwa
ushisa kanjani umpheki ophuza
Kuyoze kube nini uju ubhakwe ham
I-Pesto Mac ne-Cheese
I-Pesto Mac ne-Cheese kuthatha umdlalo wakho we-mac noshizi uye ezingeni elilandelayo! Lokhu kusonta okumnandi ngokwesiko iresiphi ye-mac noshizi yenziwa nge-havarti enokhilimu kanye nezipuni ezimbalwa ze-pesto ukuze kuthuthukiswe ukunambitheka okukhulu!
ubhekeni oboshwe izingulube zokupheka zenyama yengulube
Yenza ubuciko futhi ungeze kuzintandokazi zakho inyama yenkukhu , i-Bacon , i-broccoli noma yikuphi ukuxubana onakho efrijini noma epanini! Cabanga ‘ngamaphinifa-pasta!’
Ngijabule kakhulu ukuhlanganyela nawe le recipe namuhla ngoba ingenye yezindlela zokupheka eziningi engizithandile kusuka kugugu lami elisha eqoqweni lami lokupheka!
Lesi sitsha sothando sivela Ama-Peas Amabili kanye ne-Pod Cookbook yabo ibhalwe ngumngani wami omuhle uMaria obhulogi Ama-Peas amabili nePod Yawo .
Ngilinde isikhathi eside ukuthola izandla zami kwikhophi futhi bekufanele ukukulinda! Le ncwadi igcwele izindlela ezintsha zokupheka okungelula ukuzenza nje kuphela, zinobungani emndenini! Ngiyathanda ukuthi izithako eziningi yizinto okungenzeka unazo (njengale mac kanye noshizi, okulula ngobuhlanya nokuhlanya)!
Ama-Peas amabili ne-Pod Cookbook yabo kulula ukulandela izindlela zokupheka ezinezithombe ezinhle umndeni wakho wonke ozothanda! Nginohlu olukhulu lwama-zokupheka inja efakwe kule ncwadi vele!
Iningi labantu licabanga ngalo i-basil pesto kodwa, i-pesto isitayela sososo, futhi singenziwa cishe nganoma yisiphi isitshalo noma imifino. Isipinashi kanye ne-basil yizinhlobo ezivame kakhulu ze-pesto, kepha futhi ingenziwa ngotamatisi oswidiwe, upelepele wensimbi, ngisho namakhowe!
Ungayenza kanjani iPesto Mac noshizi
Lesi sidlo esilula se-pasta sinokhilimu futhi siyisidlo somndeni esisheshayo futhi esimnandi.
cranberry roll ups nge ukhilimu ushizi
Pheka i-pasta ngokulandela izinkomba zephakeji.
Hlanganisa ibhotela nofulawa ku-stockpot ukwenza i-roux (bheka iresiphi engezansi). Hlanganisa ubisi bese upheka uze uqine.
Faka ushizi osikiwe kuze kube yilapho usoso ubushelelezi futhi ukhilimu.
Ngenisa ngobumnene i-pasta bese uyijabulela!
Isizini ngosawoti nopelepele bese ukhonza ngokushesha. Lesi sidlo se-mac noshizi sinambitheka ngocezu lwe- okuzenzela isinkwa sikagalikhi noma ushizi we-garlic onesinkwa ukumanzisa wonke amaconsi alowo msizi we-yummy.
Izengezo Zami Engizithandayo
Le iresiphi inambitheka kakhulu eyenziwe yabhalwa kepha uMaria futhi uneziphakamiso eziningi ezinhle zokufaka kuzoba njengeresiphi entsha ngaso sonke isikhathi!
Imifino: i-broccoli eshubile , lisikiwe i-zucchini, amakhowe, noma utamatisi oswidiwe
Amaprotheni: isoseji ephekiwe, amabele enkukhu asele , ubhekeni (kunjalo)
Ukuhlwaya okwengeziwe: ama-chestnut wamanzi noma ama-walnut athosiwe
Ungayigcina Kanjani iMac Noshizi
I-Pesto mac noshizi kugcinwa kalula efrijini esikhwameni esinoziphu noma esitsheni esingangeni moya.
Friza ngendlela efanayo, sebenzisa isikhwama esifakwe uziphu noma isitsha esingangeni moya. Qiniseka ukuthi ubhala usuku ngaphandle kwesikhwama noma esitsheni.
I-Thaw efrijini ngobusuku bonke. I-Pesto mac kanye noshizi kungenzeka kungabi okuqinile ngoba inqubo yokuqandisa iphula i-pasta, kepha isengavuselelwa ngokukhipha noma iluphi uketshezi okungenzeka ukuthi luqoqekile.
Qalisa kabusha ngokufaka imac noshizi ebhodweni bese uwafudumeza kahle. Vuselela ama-flavour ngokufaka usawoti omncane nopelepele noma ezinye izengezo ezintsha futhi kuyindlela entsha ngokuphelele!
Ama-Mac ne-Cheese Lover Ungadliwa
I-Baked Mac noshizi - kubhakwe kuze kushise futhi kubhebhe
I-Mac eyenziwe ngokwenza kanye ne-Cheese Casserole - isitobha sokukhombisa!
ICreamy Stovetop Macaroni noshizi - ubilisiwe obisini
Isangweji le-Mac nelishizi - ukwelashwa okuhle kwesikhathi sasemini
I-Pot Pot Mac ne-Ushizi - ilungele ngaphansi kwamaminithi angu-30!
Crock Pot Mac noshizi - intandokazi induduzo ukudla!
Isikhathi sokulungiselela5 imizuzu Isikhathi Sokuphekaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esipheleleamashumi amabili imizuzu Izinkonzo6 UmbhaliUHolly NilssonLe stovetop mac kanye noshizi kukhulu kakhulu, kunoshizi futhi kugcwele ukunambitheka! Kulula ukwenza kepha kunambitheka okumnandi! Phrinta Phina
▢12 ama-ounces indololwane macaroni
▢4 wezipuni ibhotela elingenawo usawoti
▢¼ inkomishi ufulawa wezinhloso zonke
▢ezimbili izinkomishi ubisi lonke ekamelweni lokushisa
▢ezimbili izinkomishi I-Havarti noma ushizi we-mozzarella, osikiwe
▢3 wezipuni pesto noma isitolo sithengwe i-basil pesto
▢Usawoti we-kosher nopelepele omnyama omusha
Letha ibhodwe elikhulu lamanzi anosawoti kumathumba. Engeza i-pasta bese upheka kuze kube yi-dente, cishe imizuzu engu-8. Hlanza i-pasta bese ubeka eceleni.
Embizeni enkulu, qhafaza ibhotela phezu komlilo ophakathi. Nciphisa ukushisa kuye phansi bese ushaya kufulawa ukuze wenze unamathisele.
Faka ubisi bese ushaya uze ubushelelezi. Khulisa ukushisa kuye emaphakathi bese uqhubeka uphehla kuze kube yilapho usoso uqala ukujiya, cishe imizuzu emibili.
Faka ushizi osikiwe bese uqhubeka uvuselela kuze kube yilapho ushizi uncibilika futhi usoso ubushelelezi. Songa ku-pesto.
Engeza i-pasta, uvuselele ukuhlanganisa, bese upheka kuze kube yilapho i-pasta isifudunyezwa.
Isizini ngosawoti kanye nopelepele ukunambitha. Khonza ngokushesha.
Iresiphi ishicilelwe ngemvume evela ku- Ama-Peas amabili ne-Pod Cookbook yabo .
Amakholori:407,Amakhabhohayidrethi:51g,Amaprotheni:13g,Amafutha:16g,Amafutha agcwalisiwe:9g,Cholesterol:37mg,I-Sodium:180mg,Potassium:240mg,Umucu:ezimbilig,Ushukela:6g,Uvithamini A:590IU,I-calcium:175mg,Insimbi:1mg
Igama elingukhiyeI-Pesto Mac ne-Cheese InkamboInkambo Eyinhloko KuphekiweIsiNtaliyane© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .